Cartoon kuvanhu vakuru
Nyaya yevakuru ndeyekarimi yevakuru. Purogiramu reworking inoitika mumugwagwa, uko vaviri vacho vari kuvanda nokuda kwepabonde. Vagadziri vanobva kuMexico City vaida chaizvo kugadzira mafirimu, kuisa huchenjeri hunyanzvi uye kugadzira zvigadzirwa zvavo, kuti vape mafirimu ane mafirimu pamusoro payo iyo vhidhiyo yakapfurwa. Nhoroondo yacho yakaratidza kuti 43% yevanyori vemapurisa ndivo vanhu vakura, vanonamata vachifungisisa vhidhiyo munguva isina chinhu kubva pane basa, yekuzorodza uropi.
kuru > Comics > Cartoon kuvanhu vakuru
Tarisa cartoon kuvanhu vakuru - paIndaneti pane foni yako